Iingcebiso ze-iPhone amaqhinga aluncedo afihliweyo
Ukuvula i-iPhone nge-Apple Watch-nantsi indlela
Nge-Apple Watch kunokwenzeka ukuba uvule i-iPhone. Ngokunikwa imeko yangoku kunye nomsebenzi okhoyo e ...
27. Septemba 2021
Yenza kungasebenzi kwi-data eselfowuni kwangoko kwi-iPhone (iOS 15)
Ngeenguqulelo ezintsha ze-iOS 15, imisebenzi emininzi emitsha kunye noseto longezwe kwi-iPhone. Enye yazo ...
22. Septemba 2021
I-iPhone: Bonisa ibha yedilesi phezulu kweSafari (iOS 15)
Ngokuhlaziywa kwe-iOS 15, imisebenzi emininzi emitsha yongezwe kwi-iPhone. Enye yazo ibha yedilesi ...
16. Meyi 2021
I-ID ye-Apple: Guqula inombolo yakho yefowuni- yile ndlela isebenza ngayo
Ukuba unenombolo entsha yeselfowuni, kubalulekile ukuba utshintshe i-ID ye-Apple. I-Apple isebenzisa inombolo yefowuni ukuchonga umnini-akhawunti. Ke…
7. Epreli 2021
Cwangcisa ulawulo lwabazali kwi-iPhone-yindlela esebenza ngayo
Ungacwangcisa ulawulo lwabazali kwi iPhone umntwana wakho umgudu omncinane. I-Apple ibuza ukubakho kwezithintelo ezahlukeneyo ezinje ...
25. Matshi 2021
I-iPhone: Yenza kungasebenzi okanye uhlengahlengise isitshixo esizenzekelayo
I-iPhone okanye i-iPad icima ngokuzenzekelayo emva kwexesha elithile. Kuxhomekeke kuseto kwaye ukuba akukho misebenzi ...
18. Matshi 2021
Yenza usebenze ngokudlula ngokungxamisekileyo kwe-iPhone-yindlela esebenza ngayo
Umsebenzi omtsha ovela kuguqulelo lwe-iOS 14, oku kubizwa ngokuba kukudlula ngokungxamisekileyo, kukuvumela ukuba uvumele unxibelelwano oluthile, ...
20. Fe bruwari 2021
I-iPhone: ukuhambisa imifanekiso kwiikhompyuter iyeka-isisombululo
Ukugqithisela imifanekiso kwiikhomputha kuphoswa umyalezo: "Impazamo yokukopa ifayile okanye incwadi eneenkcukacha. Inye ukuya ...
9. Fe bruwari 2021
I-iPhone: Gcina ifoto njengoxwebhu lwePDF-nantsi indlela
Ngaba uyazi ukuba ungagcina ifoto njengePDF kunye ne-iPhone? Yonke le nto isebenza ngokuthe ngqo kwi-iPhone kunye ...
Ukwabelana ngeFoto ye-iCloud-Indlela yokwabelana ngeefoto kunye neeVidiyo
Ngomsebenzi wokwabelana ngefoto we-iCloud kunokwenzeka ukuba wabelane ngeefoto kunye neevidiyo ngokuthe ngqo kwi-iPhone okanye kwi-iPad. Njengo…